ဘဝမှတ်တိုင်: ကလစ်တစ်ချက်တည်းနဲ့windows blue error ကိုဖြေရှင်းမယ်
ကလစ်တစ်ချက်တည်းနဲ့windows blue error ကိုဖြေရှင်းမယ်
ကလစ်တစ်ချက်တည်းနိုပ်တာနဲ့လက်တော့မှာ blue screen error ကို ဖြေရှင်းပေးမဲ့RegCure pro ..သူငယ်ချင်းတို့ စက်မှာ windows မတက်ခင် blue screen မှာ loading လုပ်နေတဲ့ အချိန်တွေကြာလို့ ဘက်ထရီထုတ်ပြီး ပြန်ထည့် ပြီး သုံးနေတဲ့ တွေအတွက်ဆိုအထူး သင့် လျော်ပါတယ်.......အများစုကတော့အဲလိုဖြစ်ရင် windows ပြန်တင် တတ်ကျပါတယ်..ဒီနေရာမှာ ၁၀၀ % နှုန်း ပြန်လည်ပေါ့ ပါးသွားစေမဲ့RegCure pro သာအသုံးပြုလိုက်ပါ။ အထူးသဖြင့်windows 8 တွေမှာ အဖြစ်များတတ် ပါတယ်။ ကြိုတင်ကာကွယ်ချင်သူတွေ အနေနဲ့ လည်း တစ်ခါ သန့် ရှင်းရေးလုပ်ပေးရုံနဲ့ လုံလောက်တာမို.တော်တော်လေးအသုံးဝင်ပါတယ် .......ဒီကောင်လေးက Microsoft partner ဖြစ်တဲ့ partero logic ရဲ့ အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်ကုန် တစ်ခုဖြစ်ပြီး us 27 ဒေါ်လာလောက် ကျသင့် ပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ အမြဲသုံးလို့ ၇အောင် crack file လေးကိုထည့် ထားပေးပါတယ်။ထုံးစံအတိုင်း patch ချိုးပေးပြီး အမြဲတမ်းအသုံးပြုလို့ ရပါပြီ။ဒီကောင်လေးကို windows 32 bit &amp; 64 bit နှစ်မျိုးလုံးမှာ အဆင်ပြေပြေအသုံးပြုလို့ ရပါတယ်.....ဒီကောင်လေးက မိမိတို့ စက်ရဲ့systrem error , Malware ,junk file ,pivacy issue စတာတွေအပြင်တော်တော်များများကို ယူပစ်သလိုပျောက်သွားအောင် ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ုဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့( 7MB ) ပါခင်ဗျာ...
သူ့ ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့Windows 8 64-bit
ဖော်ပြပါ အချက်အလက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီမှူ့ ရှိရပါမယ်.......ကဲအခုပဲ စမ်းသုံးကြမယ်ဗျာ...လောလောဆယ် ကျွန်တော့်ဝင်းဒိုးနဲ့ သူငယ်ချင်းဝင်းဒိုးနှစ်ခုကို ဖြေရှင်း နိုင်ခဲ့ ပါတယ်။။။။အသေးစိတ်ကိုအောက်မှာဆက်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
RegCure Pro scans common problem areas to find what is hurting your PC's performance.
Your computer's health is assessed and RegCure Pro displays the results in an easy-to-read chart. It recommends whether cleaning is needed.
အခက်အခဲတွေမေးမြန်းမယ်ဆိုရင် ဒီမှာ LIKE လုပ်ပေးပါ။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 1/11/2014 03:37:00 am